Mareykanka oo si maadeysi ah uga hadlay Duqeyn lagu laayay Shabaab & Cidii bixisay Amarka… | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Mareykanka oo si maadeysi ah uga hadlay Duqeyn lagu laayay Shabaab & Cidii bixisay Amarka…
Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa warar is barbar socda kasoo kala saaray duqeyn Shalay lagu qaaday duleedka Muqdisho oo lagu bartilmaameedsaday sarkaal ka tirsan Alshabaab.
War saxaafadeed Xalay kasoo baxay Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in shalay oo aheyd 10-ka August ciidamada Mareykanka howlgal weerar duqeyn ah ku qaadeen duleedka Muqdisho.
Warka ayaa intaas ku daray in la qiimeynayo natiijada kasoo baxday duqeynta, dibna laga shaacin doono, waxaana taliska ciidamada Mareykanka ee Africom uu sheegay inaan la shaacin doonin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ciidamada weerarka qaaday si loo hubiyo ammaankooda.
“Waan sii wadi doonaa inaan la shaqeyno saaxiibadeena Soomaaliasi loo bur buriyo Shabaab, loogana caawiyo Soomaaliya sidii loogu soo celin lahaa nabad iyo kala dambeyn”ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Mareykanka
Sidoo kale, bayaanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkaas Mareykanka uu bixiyay amarka lagu weerarayo xarumaha Shabaab bishii March ee sanadkan, ayna sii wadi doonaan howlgaladdan.
Mareykanka ayaa horey duqeymo ugu geystay gudaha Soomaaliya, waxaana ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo katirsan Shabaab, arrintan ayaana farxad u ah dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta Shabaab
HOOS KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA AFRICOM